Arhuqa iinyawo amapolisa eZwelitsha – Ntu News
June 21, 2021 June 21, 2021 Jaco Gangat-Duvenage	0 Comments	SAPS
By Thembela Ndlumbini
Ukungavali kwendawo ezi thengisa intselo kubangele unxunguphalo kubahlali baseZwelitsha nganeno kwase-Qonce. Oku kuza emva kokuba abahlali besi sixeko benze isankxwe ngokungakhuseleki kwabo ngethuba kubanjwe (iparenting workshop) engokuxhobisa abazali kwiholo yoluntu iOliver Reginald Tambo kule lokishi.
Unomji ngowokuba iishibhini neethaveni azivali kule lokishi kwaye ezinye zivala ezinzulwini zobusuku into leyo ebeka iimpilo zabahlali ebungciphekweni boku khuthuzwa, ukudlwengulwa kwa nokuqhekezelwa izindlu.
Intatheli yethu ezinze eZwelitsha ikhawuleze yatyelela undlunkulu wesipolisa kule lokishi ngenjongo zokusabela igalelo lwama polisa kulenyewe nalapho iye yabamba udliwanondle nesithethi sonxibelelwano samapolisa eMpuma Koloni uBrigadiye Thembinkosi Kinana.
“Ezinye zengxaki esidibana nazo kukwala ukulandela umthetho ngosomashishini abashishina ngotywala, umthetho wokuvala ngamaxesha esasiwabekile ingakumbi lamaxesha abekwe ngurhulumente ngelithua le COVID19. Lonto ke yenza ubone abantu bephela bebazizigculelo zodlwengulo, ukuphangwa kuxhotyiwe nqku nokubulawa xa besiya naxa bebuya kwezi ndawo zentselo ezinzulwini zobusuku neyinto leyo ekhokhelela ekunyukeni ekunyukeni kwamazinga olwaphulo mthethetho kwezinye zendawo esihlala kuzo” utshilo uKinana.
Omnye kubahlali ocele ukungakhankanywa igama lakhe uthethe wenjenje.
“Sicela isipolisa esijolelwe lomsebenzi siwuqwalasele ngeliso lokhozi lomba. Asisalali buthongo buhlayo ngeempelaveki naphakathi evekini njengoko sihlala kufutshane kwezi ndawo zithengisa utywala, nabo bahlala kude bayaziva izijwili zezikhalo ezinzulwini zobusuku nangentseni. Asinangxaki nabanikazi bezindawo zithengisayo, eyethu ingxaki kukungathotyelwa kwemithetho esabanika yona elawula ushishino abaluqhubayo ngaphakathi ekuhlaleni. Asivani ababoni ngasonye nathi. Okwesibini mabangavunyelwa abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo ukungena nokuthengiselwa. Okwesithathu makungathengiswa iziyobisi nokutshaywa. Okwesine iingxabano azivumelekanga ezinokukhokelela ekubeni kulimale amaxhoba okanye asweleke”.
“Egameni lika Provincial Commissioner uLizie Ntshinga mna ndisisithethi sakhe, siyayibulela indima edlalwa luluntu ekusebenzisaneni nathi singamapolisa ingakumbi kumatyala esiwaphandayo. Siyalubongoza uluntu ukuba lungathi cwaka kusonakala ingakumbi kwizehlo ezifana nokuhlukunyezwa kwabantwana, amanina nabantu abadala. Asizukuhleka nabantu abophula umthetho bewazi kwaye siyaqinisekisa ukhuseleko luhlala lukhona kuluntu ngokubanzi” waleke ngelitshoyo uKinana
← Impilo ayisafani nakuqala ku Madoda
GOMPO LFA LAUNCHES THE FIRST BCMM WOMEN’S FOOTBALL LEAGUE →
September 1, 2021 September 28, 2021 Jasmin Rose	0
More storms predicted for EC